XOG:Madaxweyne Denni & Axmed Karaash oo khilaaf xoogani soo kala dhex galay “Arimaha laysku hayo waxaa kamid ah…. – Puntlandtimes
XOG:Madaxweyne Denni & Axmed Karaash oo khilaaf xoogani soo kala dhex galay “Arimaha laysku hayo waxaa kamid ah….
March 14, 2019 W LAASCAANO
GAROWE(P-TIMES)- Xoggo rasmi ah oo ay heshay Puntlandtimes.com ayaa sheegaya in khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Denni iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan (Axmed Karaash).
Khilaafkani ayaa salka ku haya arimaha gobolka Sool iyo magacaabista xubno cusub, kuwaas oo sababay in ay ku kala aragti duwanaadaan labada masuul, kadib markii shakhsi walba uu meel adag ka istaagay arimahani.
Madaxweyne Denni ayaa qorshihiisu ahaa markii hore uu u magacaabo Ex. Xildhibaan hore Cali Jaamac Faarax (Cali Dhaga Cadde) xisaabiyaha gobolka Sool, taas oo uu ka biya diiday madaxweyne ku xigeenka Puntland.
Xildhibaan hore Cali Dhaga Cadde ayaa ah shakhsi xidhiidh dhow la ah madaxweyne Denni halka dagaal siyaasadeed oo xoogan uu ka dhaxeeyo isaga iyo Axmed Karaash oo ah shakhsiga kaliya ee hor taagan magacaabistiisa.
Axmed Karaash ayaa Cali Dhaga Cadde ayaa marar kala duwan isku qabtay arimo dhowr, isagoona qayb ka ahaa in meesha laga saaro xubnimahiisii Baarlamaanka Puntland ka hor inta aysan dhicin doorashadii madaxtinimada Puntland ee 8-dii January.
Mr. Dhaga Cadde ayaa isna laf dhabar u ahaa xiligii ololihii doorashada Puntland musharax Dr. Cali Ciise Cabdi oo dagaal uu kala dhaxeeyey Axmed Karaash isna xiligaasi halgan xoogan ugu jiray qabashada xilka madaxweyne ku xigeenka Puntland, waana mida sii hurisay xiisadani.
Sidoo kale magacaabista gudoomiyaha gobolka Sool ayaa iyana muran xoogan ka dhex abuurtay labada masuul ee ugu sareeya hogaanka Puntland, halka beelaha gobolka Sool qaarkood ay dawco ka gudbiyeen Axmed Karaash.
Waxgaradka degmada Boocame, siyaasiyiin iyo xubno xilal ka haya Puntland ayaa iyaguna Axmed Karaash u cuskaday madaxweynaha Puntland, kadib markii deegaanka Faliidh Yaale uu u magacaabay degmo isla markaasna shaqaalaha dowladda uu amar ku siiyey in ay ka hawlgalaan deegaankaasi taas oo aysan ku qancin bulshada Boocame maadaama wasaaradda dowladda Puntland xafiisyadooda ugu badan ay ku yaalaan degmada Boocame isla mar ahaan taana heshiis dhex maray iyaga iyo Denni uu dhigayo in maamulka gobolka Sool iyo wasaaradduhuba ay kusii shaqeeyaan Boocame oo haatan u muuqata mid dhinaca laga dhaafay.
Hadaba xal malaga yaabaa in Denni iyo Karaash ay ka gaadhaan xiisada u dhaxaysa labadooda? xaalkuse sidee noqon doonaa sanado kadib hadiiba haatan in qab qabsi iyo khilaaf uu ka dhex dhashay labadan masuul?
PUNTLANDTIMES.COM KALA SOCO XOGAAS OO DHAN & WIXII CUSUB